အဆုံးသို့ချဉ်းကပ်သော Ankara Sivas YHT လိုင်း! .. | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
[21 / 11 / 2019] Alanya ဆရာများသည် Cable Car အားအခမဲ့ဖြစ်လိုကြသည်	07 Antalya
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီအဆုံးသို့ချဉ်းကပ်သော Ankara Sivas YHT လိုင်း! ..
14 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 06 တူရကီ, 58 Sivas, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, အစာရှောင်ခြင်းရထား, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ 0
စီစဉ်ထားသည်အတိုင်း sivas ankara yht လိုင်းဆက်လက်
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံဝန်ကြီး Mehmet Cahit Turhan သည်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ရန် Sivas သို့လေကြောင်းဖြင့်ရောက်ရှိခဲ့သည်။
Sivas အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Salih Ayhan နှင့် ၀ န်ကြီး Turhan မှဖုံးကွယ်ထားသောပြည်နယ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ ထို့နောက်အမြန်ရထားအမြစ်တည်ရှိရာနေရာတွင်ကန်ထရိုက်တာကုမ္ပဏီအရာရှိများ၊ နည်းပညာအဖွဲ့နှင့်ခရိုင်မန်နေဂျာများနှင့်တွေ့ဆုံမှုသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်2နာရီကြာမြင့်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုရရှိခဲ့သည်။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ ၀ န်ကြီး Mehmet Cahit Turhan ကစာနယ်ဇင်းသမားများကိုပြောကြားခဲ့သည်။ “ Sivas အမြန်ရထားရထား (YHT) လိုင်းကိုစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတကအများပြည်သူသိအောင်ကြေငြာလိုက်တဲ့အတိုင်းလာမယ့် Ramadan အားလပ်ရက်မတိုင်ခင်အထိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးမယ်လို့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်နေပါတယ်။
၀ န်ကြီးဌာန ၀ န်ကြီး Turhan ကပြောကြားသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကန်ထရိုက်တာများ၊ နည်းပညာအဖွဲ့နှင့်လက်ရှိအုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံမှသတင်းအချက်အလက်နှင့်အကဲဖြတ်ချက်များကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်တွင်ပြproblemနာတစ်ခု၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာအန်ကာကာနှင့် Sivas ကိုမြန်နှုန်းမြင့်ရထားဖြင့်ဆက်သွယ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကား Ankara-Sivas, Ankara-Izmir လိုင်း, Bursa-Osmaneli လိုင်း, Mersin-Gaziantep လိုင်း, Karaman-Yenice လိုင်းများမှာသာမကပဲဆက်လက်အလုပ်လုပ်သည်။ ဤကဏ္inများရှိအလုပ်များအပြင်စီမံကိန်းလေ့လာမှုများအတွက်လည်းလိုင်းများရှိသည်။ Sivas-Malatya-Elazığလိုင်း၊ Antep-Urfa-Diyarbakırလိုင်း၊ Eskişehir-Afyon-Antalya လိုင်းစီမံကိန်းဆက်လုပ်နေသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကိုဆမ်ဆန် - ကာရာကက္ကလ၊ Kırıkkale-Aksaray-Konya၊ Konya-Antalya လိုင်းပေါ်တွင်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ လာမည့်ကာလတွင်စီမံကိန်းပြီးစီးပြီးနောက်ဤလိုင်းများသည်ဤမြို့များသည်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားနှင့်တွေ့လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားဝန်ဆောင်မှုများကိုယူဆောင်လာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
Sogucak 1 အမှတ်မီးရထားပြိုကျခြင်းကြောင့်ပိတ်ထားök
Alanya ဆရာများသည် Cable Car အားအခမဲ့ဖြစ်လိုကြသည်